China DZ-1000 soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha mashiinka baakadaha vacuum joogto ah |INCHOI
Naqshadeynta madax-bannaanida biyaha-ilaalinta ee sanduuqa kantaroolka korantada waxay hubisaa badbaadada isticmaalka waxayna ku habboon tahay in la shaqeeyo.Wareegga gaaska iyo qaybaha kontoroolka korantada waa la isku halleyn karaa.Qaab dhismeedka guud wuxuu ka samaysan yahay qalab tayo sare leh oo bir ah oo tayo sare leh si loo hubiyo isticmaalka joogtada ah ee mashiinka meelo kala duwan oo shaqo ah..
Mashiinka baakadaha faakuumka joogtada ah wuxuu ka kooban yahay daboolka sare ( qolka faakuumka), goobta shaqada (suunka gudbinta), fareeshka iyo gudbinta, qalabka korontada, nidaamka faakuumka iyo qaybo kale.Bamka faakuumka ayaa lagu rakibay meel ka baxsan mishiinka, nidaamka gudbinta iyo nidaamka korantada ayaa ku jira gudaha sanduuqyada labada dhinac ee mashiinka.
Daboolka sare ee qolka faakuumka ee mashiinka baakadaha faakuumka joogtada ah waa nooca daboolka lulida tooska ah, kaas oo ka duwan daboolka bidix iyo midig ee mashiinka baakadaha faakuumka laba-qol.Quudinta iyo quudinta labadaba waxaa wada matoor, kaas oo hubin kara wada shaqaynta iyo saxnaanta gudbinta.Isla mar ahaantaana, tani waxay sidoo kale yareyn kartaa kontoroolka korantada, waxay ka dhigi kartaa hawl-qabadka mashiinka, waxayna si weyn u yareyn kartaa heerka fashilka.
In kasta oo mashiinka baakaduhu uu leeyahay hal qol oo faaruq ah, cabbirka daboolku waa 1000mm.Qolka faakuumku waxa uu leeyahay meel ballaadhan oo waxa uu hal mar meel dhigi karaa badeecooyin badan.Haddii dhererka bacahaagu aanu ka badnayn 550mm ka dib marka alaabta la xidho, waa la baakadaysan karaa.Haa, waxaan sidoo kale habeyn karnaa noocyo kala duwan sida mashiinka baakadaha vacuum-ka ee hal shaabad leh iyo mashiinka baakadaha vacuum-ka laba-laaban sida cabbirka alaabta.Mashiinka baakadaha vacuum-ga ee nooca laba-laaban, si laba saf oo badeecado ah hal mar loo dhigo, waxtarka wax-soo-saarkuna wuxuu noqdaa labanlaab midka mashiinka baakadaha vacuum-ka ee hal-shaabad.
Barnaamijka xakamaynta mashiinkani wuxuu leeyahay shaqada xusuusta.Haddii uu jiro barnaamij aan la fulin ka hor xiritaankii ugu dambeeyay, waxay keeni kartaa in qolka shaqada ee sare uu kor u kaco, sidaas darteed wuxuu noqon karaa mid caajis ah 3-6 jeer ka hor xirmada.
Baakadaha Baakadaha Tooska ah ee Xidhmada Xidhmada ee Miraha Cuntooyinka Qudaarta Cuntada waxaa si weyn loogu isticmaalaa noocyo kala duwan oo cunto, qalab, dawooyin, kiimikooyin, alaabada biyaha, warshadaha qaybaha elektarooniga ah, noocyada kala duwan ee alaabta (adag, dareere, budada, koollada) ee vacuum-ka buuxaan. .Waxay ka ilaalin kartaa badeecada oksaydheynta ama burburka ay keento korriinka bakteeriyada, si ay u dheereyso cimrigeeda iyo wakhtiga kaydinta.
1.Dhammaan bannaanka birta aan-kala-sooca lahayn oo buuxiya heerarka caafimaadka.
2.Shiinaha & Ingiriisi shaashadda taabashada shaashadda, hawlgal dareen leh oo fudud.
3.Sealing waxaa la daabici karaa isku mar taariikhda, tirada tirada.
4.Waxay raaci kartaa shuruudaha rakibaadda qalabka la buufiyo.
5.Xajmiga gaarka ah waa la habeyn karaa.
6.Bay'adda shaqada aamusnaan, buuq yar, tamarta badbaadinta.
1.It waxaa lagu muujiyey by processing si toos ah ee faakuumaynta, shaabadeynta, daabacaadda, qaboojinta;
2.Digital vacuum panel bandhig;
3.Vacuum degree iyo heerkulka shaabadda waa la hagaajin karaa;
4.It waxaa si gaar ah loogu talagalay naqshadaynta qaansada;
5.Wearable silikoon xidhidhiyaha siligga oo leh waqti dheer iyadoo la isticmaalayo;
6.High vacuum degree oo tayo fiican leh.
1: Mashiin ka samaysan bir aan bir lahayn, oo ku habboon hilibka, sausages, cuntooyinka badda, khudaarta duurjoogta ah ee faakuum-ka buuxaan ayaa lagu habeyn karaa bamka weyn ee dibadda!
2: Mashiinka si toos ah u lulaya daboolka, awoodda baakadaha waaweyn, qaabeynta, Germany laga keeno 160 bambooyin, vacuum sare, nolosha adeegga dheer.Bamka gudaha 160 sidoo kale waa la habeyn karaa.
3: Mashiinkaani wuxuu si gaar ah ugu habboon yahay maqaallada baakadaha.Tusaale ahaan: qaybo ka mid ah hilibka lo'da, hilibka lo'da oo dheer, cirridka, basbaaska, dharka, gogosha, iwm.
Hore: DZ600/2S mashiinka baakadaha si toos ah
Xiga: Mashiinka baakadaha faakuumka quudinta bac-wareejin toos ah
Mashiinka Baakaynta Vacuum Joogta ah
Dz 600 Mashiinka Baakadaha Vacuum
Mashiinka Baakaynta Faaruqinta Cuntada Warshadaha
Mashiinka Baakaynta Fakimka Caqliga leh
DLZ-420/520 Kombiyuutar si toos ah u socda
Baakad si toos ah bac-quudinta vacuum m...